जसको एक सेल्फिले खेल जिवननै बर्वाद गरिदियो !
काठमाडौ,८ साउन । जर्मन फुटबल संध(डिएफबी)ले फुटबल खेलाडि मेसुत ओजिलद्धारा लगाएको रंगभेदको आरोपलाई खारेज गरिदिएको छ । तर संधले यो कुरामा भने सहमत जनाएको छ
रंगशाला सिलन्यासको तयारी पुरा
शरद रेग्मी, तुलसीपुर ८ साउन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ बेलझुण्डीमा हुन लागेको राष्ट्रिय रंगशाला सिलन्यासको तयारी पुरा भएको छ । रिपोर्टर्स क्लब दाङले आयोजनामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार सिलन्यास हुन लागेको
मिडफिल्डर ओजिलले लिए सन्यास !
काठमाडौं, ७ साउन । बलिया मिडफिल्डरको रुपमा परिचय बनाएका मेसुट ओजिलले फुटबल जीवनबाट सन्यास लिएका छन् । साथै उनले जर्मनको राष्ट्रिय टिमबाट नखेल्ने घोषणा समेत गरे । उनले ट्विटरमार्फत तीन
नेमार रियल मेड्रिडजाने कुरा हल्लामात्र भएको खुलासा
काठमाडौँ,७ साउन । नेमारले खेल्दैआएको आफ्नो क्लब छोड्ने चर्चाहरुको बिचमा आफ्नो आधिकारीक धारणा ब्यक्त गरेका छन । उनले हल्लाका पछाडि नलाग्न सबैमा अनुरोधपनि गर्दे आफु पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)मा नै
अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनको आजबाट शुरुवात
काठमाडौँ, ७ साउन ।‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको चौथो संस्करण आजदेखि यहाँ शुरू भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को कभर्ड हलमा सञ्चालित उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन युवा तथा खेलकूदमन्त्री
काठमाडौँ,७ साउन । आफ्नै देशको झन्डा बोकेर विश्वकप हेर्ने सपना कुन चाहिँ समर्थकको नहोला। तर ३२ टोलीमात्र अन्तिम चरणमा पुग्ने भएकाले धेरै समर्थकको यो सपना पूरा हुँदैन। र, तिनीहरू आफ्नो
ह्याम्पसायरलाई २४३ रनले पछि पार्दै नेपाल विजयी
काठमाडौं, ६ साउन । युरोप भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पहिलो अभ्यास खेलमा फराकिलो जित निकालेको छ। कप्तान पारस खड्काको शतकीय इनिङ्सको मद्दतमा नेपालले पहिलो अभ्यास खेलमा इङ्ल्याण्डको स्थानीय
१३ औँ सागमा २७ खेल
काठमाडौं, ६ साउन । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा २७ खेल समावेश हुने भएका छन् । आयोजक नेपालले सन् २०१९ को मार्चमा हुने १३ औँ सागमा थप दुई खेल
रोनाल्डोले होटलमा जादा सहयागी कामदारलाई कति टिप दिन्छन ?
काठमाडौँ, ६ साउन । रोनाल्डोले ग्रिसमा बिदा मनाएर फर्किने बेला होटका कामदारलाई ठूलो रकम टिप दिएका छन् । रोनाल्डोले रुसमा भएको विश्वकपमा पोर्चुगल अन्तिम १६ बाट बाहिरिएपछि बिदा मनाउन ग्रिस
विश्वकप पदक स्वीकार नर्गर्ने क्रोएसियाली खेलाडि
काठमाडौँ,६ साउन । क्रोएसियाली स्ट्राइकर निकोला कालिनिचले विश्वकप पदक ग्रहण गर्न अस्वीकार गरिदिएका छन । स्ट्राइकर कालिनिच सम्पन्न रुस विश्वकपमा क्रोएसियाली टोलीको अन्तिम २३ भित्रका खेलाडी रहेका थिए । यद्यपि
काठमाडौं, ६ साउन । २०२९ सालमा झापा ११ बाट फुटबल करिअर सुरु गर्दा धीरेन्द्र प्रधानले नेपाली फुटबलमा एक फरक छाप राख्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । प्रधानलाई एकदिन राष्ट्रिय टिमबाट फुटबल
पोखरा, ५ साउन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एउटा खेलकूद मैदान निर्माण गरिने बताएका छन । अखिल नेपाल पूmटबल संघ